AmaNgqina KaYehova Anceda Abantu Abangaboniyo BaseAfrika
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISilozi ISpanish Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiCatalan IsiChichewa IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFante IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiGun IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKabyle IsiKannada IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiKrio IsiLingala IsiLithuania IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMingrelian IsiMixe IsiMyanmar IsiNgesi IsiNorway IsiOromo IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseCuzco) IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTahiti IsiTankarana IsiTarascan IsiTelugu IsiThai IsiTigrinya IsiTongan IsiTotonac IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTurkish IsiTzeltal IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUrdu IsiValencian IsiWelsh IsiXhosa IsiZulu isiWallisian
Kumazwe angathathi-ntweni, abantu abangaboniyo abanawo amathuba afanayo nabo bahlala kwezinye iindawo. Ngamanye amaxesha, abahoywa ngabantu, yaye abancedwa kwizinto abangakwaziyo ukuzenza ezilula gqitha kwabanye. Ngokomzekelo, kunokuba nzima gqitha ngabo ukwenza izinto ezifana nokuya kuthenga ukutya, ukukhwela ibhasi kunye nokusebenzisa imali. Ukanti nokufunda kukwayingxaki. Ayingabo bonke abakwaziyo ukufunda iBraille. Nokuba bayakwazi, zisenokungabikho iincwadi ngeelwimi zabo.
Kangangeminyaka engaphezu kweyi-100, amaNgqina kaYehova ebesenza iincwadi ezicacisa iBhayibhile zabantu abangaboniyo. Ukuze kufumaneke iincwadi zeBraille ngesiChichewa, amaNgqina aye athumela iiprinta noomatshini bokudibanisa ezi ncwadi besuka eNetherlands besiya eMalawi.
ULeo osuka kwiofisi yesebe yamaNgqina kaYehova eBrazil nonamava ekwenzeni iincwadi zeBraille, wathatha uhambo oluya eMalawi. Apho wanceda abantu abahlanu bafunda ngaba matshini nenye inkqubo yekhompyutha eyenziwe ngamaNgqina etshintsha amagama abe ngaweBraille. Le nkqubo itshintsha amagama esiChichewa iwabhale ngeBraille. Ukuze ikwazi ukwenza loo nto, bekufuneka kufakwe oonobumba besiChichewa nabeBraille. Le nkqubo ijika amagama abe ngaweBraille ize iwabeke ngendlela eza kunceda abo bayisebenzisayo bayifunde lula. Khawuve ukuba athini amanye amaNgqina aseMalawi ngeencwadi zawo zeBraille.
UMunyaradzi libhinqa eliselula elinesingxungxo sokuba ngumsasazi kanomathotholo. Likwachitha iiyure eziyi-70 nyanga nganye lifundisa abantu iBhayibhile. Eli bhinqa lithi: “Bendikade ndizifumana ngesiNgesi iincwadi zeBraille, kodwa iyandichukumisa into yokuba ngoku ndizifumana ngolwimi lwam lweenkobe. Ndiyixabisa kakhulu imigudu eyenziwa ngamanye amaNgqina asincede safumana iincwadi zeBraille ngeelwimi zethu. Oku kundenza ndiqonde ukuba asilityelwanga yaye siyaxatyiswa.”
UFrancis liNgqina elihlala kumntla weMalawi. Kuba engaboni, ebexhomekeke ebantwini ukuba bamfundele. Xa wafumana iincwadi zakhe zokuqala zesiChichewa ezibhalwe ngeBraille wathi: “Ingathi ndiyaphupha!”
ULoyce akaboni naye yaye uchitha ixesha lakhe elininzi eshumayela. Uncede abantu abayi-52 batshintsha ubomi babo. Ukwenze njani oku? Xa efundisa abantu usebenzisa iincwadi zeBraille ngoxa aba abafundisayo besebenzisa eziqhelekileyo, zonke zenziwe ngamaNgqina kaYehova.
ULoyce ufundisa umntu iBhayibhile
ULeo osuka eBrazil, ebekukhe kwathethwa ngaye ngaphambilana uthi: “Kwatsho kwathi ngco kum ngaphakathi xa ndandinika abantu iincwadi zeBraille, ndibona nendlela abavuya ngayo kuba bezifumana ngeelwimi zabo. Uninzi lwabo lumbulela kakhulu uYehova kuba ngoku luyakwazi ukulungiselela iintlanganiso zamaKristu nomsebenzi wokushumayela lungakhange luncediswe. Alusaxhomekekanga ekufundelweni ngabantu. Lutsho lube lodwa xa lufunda. Lunokufundisa neentsapho zalo ngoYehova. Ezi ncwadi ziluncede lwamazi ngakumbi uYehova.”
Funda indlela igama likaThixo, uYehova, elavela ngayo eBhayibhileni.